ဘ၀ဟောင်းကဆွေမျိုးတွေရောက်လာခဲ့တဲ့ နန္ဒာလှိုင်တို့အလှူပွဲ – Tameelay
နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီနန္ဒာလှိုင်တစ်ယောက် သူမရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူမွေးနေ့မှာ မော်တင်စွန်းစေတီတော်ကိုထီးတင်ပွဲအလှူပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်ကိုအလှူရေစက်လက်နဲ့မကွာပါပဲ။ လိုက်ဖက်လွန်းပြီး ကြည့်ရတာကြည်နူးစရာ ကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးပါပဲ။ ဝတီ ရတီနဲ့ နဒီဆိုတဲ့ ချစ်စဖွယ်ကစ်ကစ်တုတ်တုတ် သမီးလေးသုံးယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ယခုချိန်ထိ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် ချစ်ခြင်းမပြယ်သေးပဲ ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရွှေလက်တွဲနေတဲ့ ချစ်စဖွယ် ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ဟာ သူမခင်ပွန်းရဲ့ အသက် လေ့ဆယ့်တစ်နှစ်ပြည့် တဲ့ မွေးနေ့ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မွေးနေ့အကြိုတစ်ရက်မှာပဲ မော်တင်စွန်းစေတီတော်ကို ထီးတောင်တင်အလှူပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မွန်မြတ်လှတဲ့အလှူလေးမို့ သာဓုခေါ် ထိုက်ပါတယ် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ။
နန္ဒာလှိုင်က Facebook မှာ သူမရဲ့ချစ်လှစွာသောခင်ပွန်းရဲ့ မွေးနေ့ပွဲလေးအတွက် ” Happy birthday! ပါယောကျာ်းရေ 41 နှစ်ပြည့်ပြီနော် ဘဝရဲ့ကျန်ရှိနေတဲ့အချိန်တိုင်းကို စိတ်ချမ်း သာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ ” ဆိုပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးရေးပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ 2017 တုန်းက မိသားစုတွေ ဘန်ကောက်ကိုခရီးထွက်တုန်းက ခင်ပွန်း ဖြစ်သူက သူမကိုချီပင့်ကာ နှစ်ယောက်သားပြုံးပျော်နေတဲ့ ပုံရိပ်လေးက ပရိတ်သတ်တွေ ကြားမှာ ရေပန်းစားခဲ့ပါသေးတယ်။ အတူတူရှိတဲ့အချိန်တွေ ပိုမိုများလာတဲ့အမျှ ချစ်တဲ့ အချစ်တွေကလည်း ပိုမိုတိုးပွားလာခဲ့ပြီး ချစ်စဖွယ်သမီးလေးသုံးယောက်နဲ့အတူ ပျော်ရွှင် စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးကိုလည်း တည်ဆောက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူမတို့မိသားစုရဲ့ မောင်တင်စွန်းစေတီတော်ထီးတင်ပွဲကပုံရိပ်လေးတွေက တကယ်ကို ကြည်နူးစရာကောင်းလှပါတယ် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ။ သူမတို့အလှူပွဲမှာ ဘဝအဆက်ဆက်က ဆွေမျိုးတွေလာရောက်ကြတာကြောင့် သူမကငိုချင်သလိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီး Facebook မှာ စာတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ” အမျိုးတွေလာတယ်ထင်တယ် စိတ်ထဲဝမ်းနည်းနေတယ် ” ဆိုပြီး စာတင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အလှူတစ်ခုပြုပြီဆို ကိုယ်နဲ့ဆက်နွယ်ခဲ့သူတွေဟာ သာဓုခေါ် ဆိုဖို့ရောက်လာတာတွေ ရှိတတ်တဲ့အတွက် သူမတို့အလှူလေးမှာလည်း ရောက်လာခဲ့ကြပုံ ပါပဲ။ အလှူပြုနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါ တယ်။
Photo – Nandar Hlaing’s FB
နာမညျကြျောသရုပျဆောငျမငျးသမီးတဈဦးဖွဈခဲ့တဲ့ အကယျဒမီနန်ဒာလှိုငျတဈယောကျ သူမရဲ့ခငျပှနျးဖွဈသူမှေးနမှေ့ာ မျောတငျစှနျးစတေီတျောကိုထီးတငျပှဲအလှူပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ တကယျကိုအလှူရစေကျလကျနဲ့မကှာပါပဲ။ လိုကျဖကျလှနျးပွီး ကွညျ့ရတာကွညျနူးစရာ ကောငျးတဲ့ မိသားစုလေးပါပဲ။ ဝတီ ရတီနဲ့ နဒီဆိုတဲ့ ခဈြစဖှယျကဈကဈတုတျတုတျ သမီးလေးသုံးယောကျကိုပိုငျဆိုငျထားပွီး ယခုခြိနျထိ တဈယောကျအပျေါ တဈယောကျ ခဈြခွငျးမပွယျသေးပဲ ကွငျကွငျနာနာနဲ့ ပြျောပြျောရှငျရှငျ ရှလေကျတှဲနတေဲ့ ခဈြစဖှယျ ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီကနဟေ့ာ သူမခငျပှနျးရဲ့ အသကျ လဆေ့ယျ့တဈနှဈပွညျ့ တဲ့ မှေးနပှေဲ့လေးပဲဖွဈပါတယျ။ မှေးနအေ့ကွိုတဈရကျမှာပဲ မျောတငျစှနျးစတေီတျောကို ထီးတောငျတငျအလှူပှဲပွုလုပျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ မှနျမွတျလှတဲ့အလှူလေးမို့ သာဓုချေါ ထိုကျပါတယျ ပရိတျသတျကွီးရေ။
နန်ဒာလှိုငျက Facebook မှာ သူမရဲ့ခဈြလှစှာသောခငျပှနျးရဲ့ မှေးနပှေဲ့လေးအတှကျ ” Happy birthday! ပါယောကျြားရေ 41 နှဈပွညျ့ပွီနျော ဘဝရဲ့ကနျြရှိနတေဲ့အခြိနျတိုငျးကို စိတျခမျြး သာကိုယျခမျြးသာနဲ့ဖွတျသနျးနိုငျပါစေ ” ဆိုပွီး မှေးနဆေု့တောငျးလေးရေးပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ 2017 တုနျးက မိသားစုတှေ ဘနျကောကျကိုခရီးထှကျတုနျးက ခငျပှနျး ဖွဈသူက သူမကိုခြီပငျ့ကာ နှဈယောကျသားပွုံးပြျောနတေဲ့ ပုံရိပျလေးက ပရိတျသတျတှေ ကွားမှာ ရပေနျးစားခဲ့ပါသေးတယျ။ အတူတူရှိတဲ့အခြိနျတှေ ပိုမိုမြားလာတဲ့အမြှ ခဈြတဲ့ အခဈြတှကေလညျး ပိုမိုတိုးပှားလာခဲ့ပွီး ခဈြစဖှယျသမီးလေးသုံးယောကျနဲ့အတူ ပြျောရှငျ စရာကောငျးတဲ့ မိသားစုလေးကိုလညျး တညျဆောကျထားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
သူမတို့မိသားစုရဲ့ မောငျတငျစှနျးစတေီတျောထီးတငျပှဲကပုံရိပျလေးတှကေ တကယျကို ကွညျနူးစရာကောငျးလှပါတယျ ပရိတျသတျကွီးရေ။ သူမတို့အလှူပှဲမှာ ဘဝအဆကျဆကျက ဆှမြေိုးတှလောရောကျကွတာကွောငျ့ သူမကငိုခငျြသလိုလိုဖွဈတယျဆိုပွီး Facebook မှာ စာတငျခဲ့ပါသေးတယျ။ ” အမြိုးတှလောတယျထငျတယျ စိတျထဲဝမျးနညျးနတေယျ ” ဆိုပွီး စာတငျထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အလှူတဈခုပွုပွီဆို ကိုယျနဲ့ဆကျနှယျခဲ့သူတှဟော သာဓုချေါ ဆိုဖို့ရောကျလာတာတှေ ရှိတတျတဲ့အတှကျ သူမတို့အလှူလေးမှာလညျး ရောကျလာခဲ့ကွပုံ ပါပဲ။ အလှူပွုနတေဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ပရိတျသတျကွီးအတှကျ တငျဆကျပေးလိုကျပါ တယျ။
ကိုကြီး ကိုကြီး” သီချင်းကို နေတိုးနဲ့ အတွဲညီညီဟဲခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်
အကယ်ဒမီ နေတိုးရဲ့ အကယ်ဒမီညစာစားပွဲမှာ နေတိုးနဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်တို့ သီချင်းအတူတူတွဲပြီး ဆိုထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးက ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားလို့နေပါတယ်။ နေတိုးနဲ့အတူ “ကိုကြီးကိုကြီး” သီချင်းကို အတွဲညီညီ သီဆိုခဲ့တာပါ။ နေတိုးနဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်တို့ အဲ့ဒီသီချင်းလေးကို ဆိုနေချိန်မှာ ဒါရိုက်တာ သားညီက သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေ Live လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး …